माघ ८, २०७८ ०६:३६:०३
कर्णालीको विकटताको कथा बोकेको ‘रेलको बाटो’ सार्वजनिक (भिडियो ) कर्णालीको बास्तबिक अवस्था र त्यहाको पेरीफेरी कथा बोकेको 'रेलको बाटो' गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। फाल्गुन २८, २०७७
हेटौंडाकि गीतकार अम्रिता नेपालको 'मलाई सम्झिनु' (भिडियो) हेटौंडाकि सर्जक अम्रिता नेपालको 'मलाई सम्झिनु' म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । केहि समय अघि सम्म हेटौंडामा संचारकर्ममा रहेकी अम्रिताले माया गर्नेहरुको गित भन्दै म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । फाल्गुन १०, २०७७
चलचित्र 'प्रसाद २' चैतको दोस्रो साताबाट छायांकनमा जाने, निश्चल बस्नेत पनि देखिने नेपालि कथानक चलचित्र 'प्रसाद २’ मा निश्चल बस्नेत देखिने भएका छन् । चलचित्रका लागि हालै निश्चलले फिल्म निर्माण पक्षसँग औपचारिक सम्झौता गरेका छन् फाल्गुन १०, २०७७
उत्सव चौलागाईंको ‘हासेकै छैन’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित ) हेटौंडाका गीतकार उत्सव चौलागाईंको ‘हासेकै छैन’ गजल गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पुष १५, २०७७
नेपाल आइडलको बिजेता सज्जा चौलागाईं, एकजनामा कोरोना पुष्टि भएपछी टोलीनै सेल्फ आइसोलेसनमा नेपाल आइडल सिजन ३ को बिजेता सज्जा चौलागाईं बनेकी छिन । एपी 1 टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने नेपाल आइडलको आजको फाइनल राउण्डमा किरण भुजेल र प्रवीण बेडुवाललाई पछी पार्दै चौलागाईं बिजेता बनेकी हुन् । आइडलको फस्ट रनरअप प्रवीण बेडुवाल बने भने सेकेन्ड रनरअपको उपाधि किरणकुमार भुजेलले उचाले । नेपाल आइड–(३ को उपाधिसहित विजेताले ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रा भदौ १२, २०७७
सुशान्त सिंह राजपूतमाथि फिल्म बन्दै : ‘सुसाइड या मर्डर’ बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनपछि भइरहेको बहसका बीच उनको जीवनमा आधारित फिल्म बन्ने भएको छ । ‘सुसाइड या मर्डर’ नामक फिल्मको शीर्ष भूमिकामा सुशान्त झैं देखिने टिकटक स्टार सचिन तिवारीले अभिनय गर्ने भएका छन् । यो फिल्म केही हदसम्म सुशान्तको जीवनमा आधारित हुनेछ । श्रावण ६, २०७७
'अमेरिकन आइडल'को टप २० मा पुगे नेपाली युवा नेपाली मूलका दिवेश पोखरेलले ‘अमेरिकन आइडल’को टप २० मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन् । आइतबार प्रशारण भएको एपिसोडमा उनले दमदार प्रस्तुति दिदै टप २० मा पुगेका छन । उनले बब मार्लीको गीतमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दिएको प्रस्तुतिले निर्णायक मण्डलका तीनैजना निर्णायक नै प्रभावित भएर प्रशंसा गरेका थिए। अघिल्लो हप्ताझै यस हप्ता पनि सबै निर्णायकहरू उठेर ताली चैत्र २४, २०७६
सन्देशमुलक चलचित्र ‘अटिजम’को दोस्रो गीत सार्वजनिक फरक विषयवस्तुमा बनेको सन्देशमुलक चलचित्र ‘अटिजम’को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । केशव रेग्मी सान्दाइद्धारा निर्देशित चलचित्र अटिजमको सरस्वती विद्याकी खानी बोलको बाल प्रस्तुती रहेको गीत खुल्ला सञ्चारको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो । चलचित्र अटिजमकी मुख्य कलाकार करुणा पोख्रेलको जन्मदिनको अवसर पारेर गीत रिलिज गरिएको थियो । गीतमा अटिजम लागेका बालक सम्मान आचार्यको साथै बिक्रम श्रेष्ठ सागर, करुणा पोख्रेल, पत्रकार पुण्यराज पुडाशैनी लगायतलाई देख्न सकिन्छ । कमला श्रीको शब्द रहेको गीतमा संगीतकार केशव रेग्मी (सान्दाइ) को संगीत गरेका छन् । चैत्र २०, २०७६
फिल्म दुई नम्बरी, छायांकन पनि रोकियो कास्कीको घाचोकमा छायांकन भइरहेको फिल्म ‘दुई नम्बरी’ को छायांकन रोकिएको छ । कोरोना प्रभावका कारण फिल्मको छायांकन स्थगित गरिएको निर्देशक दिपेन्द्र लामाले बताए । चैत्र १०, २०७६
अमेरिकन आइडलमा छानिए नेपाली युवा (भिडियोसहित) विश्वकै सबैभन्दा ठूलामध्येको एक गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा नेपाली युवा छानिएका छन् । अमेरिकाका विश्वस्तरीय संगीतकार लियोनेल रिची, गायक ल्युक ब्रायन र गायिका केटी बेरीको अगाडि प्रस्तुती दिँदै काठमाडौंका दिवेश पोखरेल हलिउड प्रस्तुतीका लागि छानिएका हुन् । हलिउड प्रस्तुतीका लागि छानिएका टप ४० मध्येका एक दिवेश हाल अमेरिकाको क्यान्सस राज्यको विचिटामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उनी ५ वर्षअघि नेपालबाट अमेरिका गएका हुन् । आइतबार अमेरिकी च्यानल एबिसीबाट प्रसारण भएको पहिलो श्रृंखलाबाट उनी छानिएका हुन् । दिवेशले आर्थर गनको उपनामबाट गाउँदै आएका छन् । फाल्गुन ५, २०७६
गायक पशुपति शर्माले ल्याए नयाँ गीत ‘जता पनि चोर’ गायक पशुपति शर्माले नयाँ गीत ‘जता पनि चोर’ सार्वजनिक गरेका छन् । ‘लुट्न सके लुट्’ भाग–२ उनको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरेका हुन्। । 'जता पनि चोर, चोर जति सबैलाई हाल्नै पर्छ खोर’ बोलको गीतमा विद्यमान भ्रष्टाचार, वेथिति र ठग प्रवृत्तिप्रति व्यङ्य गरिएको छ । राजनीतिक तथा सामाजिक विक्रिति विरुद्ध व्यङ्ग्य गरिएको गीतले विक्रिति, विसङ्गती र भ्रष्टचाररहित समाजको परिकल्पना गरेको छ । गितको शब्द, संगीत तथा स्वर पशुपतिकै रहेको गीतको भिडियो निर्देशन दुर्गा पौडेलले गरेका छन् । भिडियोमा गायक पशुपति मुख्य रुपमा फिर्चड छन् । पशुपतिले गत वर्ष ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालको राजनीतिक संस्कार र त्यसले सिर्जना गरेको अवस्थालाई तीखो व्यङ्ग्य गरेको उक्त गीतको राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताले चर्को विरोध गरेका थिए । संसद्मा समेत चर्काचर्की बहस भएपछि पशुपतिले उक्त गीत आफ्नो युट्युब च्यानलबाट हटाएका थिए । त्यसकै अर्को भागमा रुपमा उनले ‘जता पनि चोर, चोर जति सबैलाई हाल्नै पर्छ खोर’ बोलको गीत ल्याएका हुन् । फाल्गुन २, २०७६
चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुरको अध्यक्षमा पुनः गौतम 'चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल' मकवानपुर शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएकोक छ। आज सम्पन्न चौथो अधिवेशनले नौं सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । अधिवेशनले मणिराज गौतमलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। त्यस्तै उपाध्यक्ष कपिल खड्का, सचिव श्रीराम अर्जुन दाहाल, सह-सचिव रविन्द्र गौतम, कोषाध्यक्ष चयन भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा सन्नु रिजाल, दर्शन क्षेत्रि, अमृता पराजुली र दिपक सिंह रुम्बा सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । कार्यक्रम बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो। चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार राई, केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्र महर्जन,नेपाल चलचित्र पत्रकार संघका महासचिव अनिल यादव, प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रताप विष्ट लगायतको उपस्थिति थियो । माघ २६, २०७६
रिमाको प्रश्न: ‘नागरिकलाई सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी' ? गायिका आस्था राउतको विमानस्थल प्रकरणमा कलाकर्मीहरुले मुख खोल्न थालेका छन् । केही दिनसम्म मौन बसेका कलाकार्मीहरु अहिले सामाजिक संजालमार्फत अगाडि आएका हुन् । यही क्रममा नायिका तथा मोडल रीमा विश्वकर्माले पनि आस्था राउत प्रकरणमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले, नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी हुनसक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरेकी छिन् । रीमा लेख्छिन्–‘देशमा दिनानुदिन जघन्य अपराध घटिरहँदा अनी ठूला अपराधी रिट र तारिखमा खुलेआम हाम्रै वरपर घुमिरहँदा त्यसै त हामी असुरक्षित छौं । अझ, विमानस्थलको सामान्य नोकझोकलाई लिएर नागरिकविरुद्ध मुद्दामा ओर्लिएको प्रहरी संगठनले आम नागरिकमा प्रहरी प्रशासनमाथि विश्वास भन्दा बढी डर पैदा गरेको छ ।’ माघ ७, २०७६
सुबिसुले २१औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पुष २७, २०७८ 46